What To Do When the Stock Market Crashes? - Stock Market Analysis & Research Center
तपाईले जतिसुकै कडा तयारी गरे पनि, शेयर बजार क्र्यास हुँदा तपाईको लगानीमा पनि केही असर पर्छ। धेरै विज्ञहरूले सेयर बजार क्र्यास हुँदा तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू सूचीबद्ध गर्छन् तर यसले के गर्छ? त्यहाँ धेरै विशेषज्ञहरू छैनन् जसले मूर्ख समाधानहरू सूचीबद्ध गरेका छन्। सेयरको मूल्य फेरि माथि नआउन्जेल सबैजना धैर्य वा आर्थिक रूपमा स्थिर हुँदैनन् र यस्तो अवस्थामा दबाब एकदमै उच्च हुन्छ। सुरु गर्नको लागि, हामी तपाईंलाई गहिरो सास लिनुहोस् र आफ्नो शरीरलाई आराम गर्न सुझाव दिन्छौं र दोस्रो चरण तलको चेकलिस्ट जाँच गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई स्टक बजार क्र्यास हुँदा के गर्ने भनेर मद्दत गर्नेछ।
यदि तपाईं Long Term Investor हुनुहुन्छ भने केहि नगर्नुहोस्:-
यदि तपाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने पहिलो र मुख्य कुरा भनेको केहि नगर्नु हो। एक दीर्घकालीन लगानीकर्ताले स्टक बजारको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्न कम हुन्छ किनभने यसले उनीहरूलाई ठूलो हिटको साथ प्रभाव पार्दैन। यसको कारण सरल छ, शेयर बजारको अस्थिरता; आज बजार घुँडा टेक्यो भने अबको केही दिनमा फेरि आकाशमा उकालो लाग्नेछ । यो एक दीर्घकालीन लगानीकर्ता को रूप मा केहि गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ किनकि लहर माथि र तल दुबै थ्रेसहोल्ड संग प्रवाह जारी छ।
थप रूपमा, यो दीर्घकालीन लगानीको लागि थप स्टकहरू किन्नको लागि खुला विन्डो हो किनभने मूल्यहरू तलको थ्रेसहोल्डमा छन्। यस तरिकाले, तपाईंले यी समयमा थोरै मात्र खर्च गरेर भविष्यको लागि थप नाफा बुक गर्न सक्नुहुन्छ
5 वर्षको लागि पर्याप्त बचत नगरी शेयर बजारमा पैसा लगानी गर्नुहोस्:-
स्टक बजार क्र्यास छोटो अवधिको मार्केटरहरूको लागि राम्रो समाचार होइन र यो सधैं विचलित हुन्छ। यसको सामान्य कारण भनेको बजारमा संलग्न पैसा वास्तवमा ऋणको रूपमा लिइएको वा सम्पूर्ण सम्पत्ति बुझाएर लिइएको पैसा हो। हामी कुनै पनि मार्केटरलाई अर्को5वर्षको लागि पर्याप्त बचत नगरी शेयर बजारमा पैसा लगानी गर्न सिफारिस गर्दैनौं।
स्टक मार्केटर बुद्धिमान हुनुपर्छ र शेयर बजारको अस्थिरता जान्न आवश्यक छ। शेयर बजारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नु राम्रो होइन र यसले अन्ततः ठूलो घाटा निम्त्याउँछ। यदि तपाईं आज स्टकमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने, पैसा लगियो भने तपाईंसँग पर्याप्त इन्धन बाँकी छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा चाल भनेको स्टक बजारमा निश्चित पैसा लगानी गर्नु हो जुन मेरो लागि अर्थहीन छ। त्यसैले भोलि पैसा डुबे पनि आम्दानीको नियमित धारामा दौडिरहेको छु ।
आय पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्नुहोस् :-
एक चतुर मार्केटरको रूपमा, कसैले स्टक बजार बाहिर सम्पत्तिहरू निर्माण गर्नुपर्छ जसले स्टक बजार क्र्यास हुँदा पनि निरन्तर पैसा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्छ। आम्दानी पोर्टफोलियोमा विविधीकरण गर्नाले सेयर बजार घट्ने असरलाई कम गर्न सकिन्छ। स्टक बजारले तपाईंको लागि नाफामा काम गरिरहेको बेला हामी तपाईंलाई थप र धेरै सम्पत्तिहरू निर्माण गर्न सुझाव दिन्छौं। आयको निरन्तर चलिरहेको स्ट्रिमले स्टक बजार क्र्यास पछि पनि तपाईं आर्थिक रूपमा स्थिर हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ।
आज सुरु गर्नुहोस् र स्टक बजार बाहेक बलियो र अधिक विविध आय पोर्टफोलियो निर्माण गर्नुहोस्। वारेन बफेटको भनाइ अनुसार, "तपाईंका सबै अण्डाहरू एउटै टोकरीमा नराख्नुहोस्," हामी तपाईंलाई पनि त्यस्तै गर्न सुझाव दिन्छौं, विविध बन्नुहोस्।
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने थप स्टक किन्नुहोस् :-
बजार क्र्यास हुँदा धेरै स्टकहरू किन्नको लागि उत्तम अवसर छ। यदि तपाइँसँग पर्याप्त बचत छ र तपाइँको लागि आय उत्पन्न गर्ने अन्य सम्पत्तिहरू छन् भने, यो अधिक स्टकहरू किन्नको लागि सही समय हो। यसको कारण सरल छ, स्टक बजार क्र्यासले सबै मूल्यहरू तल रहेको जनाउँछ र यो कम किन्न र उच्च बेच्ने उत्तम अवसर हो।
हामी सबैलाई सेयर बजारको थम्ब नियम थाहा छ, कम किन्नुहोस् र उच्च बेच्नुहोस्। स्टक बजार क्र्यासको अवस्थामा, तपाईले धेरै छोटो अवधि र दीर्घकालीन स्टकहरू किन्न सक्नुहुन्छ जसले बजार पुन: माथि हुँदा नाफा बुक गर्नेछ।
तर के तपाइँ स्टकहरू अन्धाधुन्ध रूपमा किन्न जाँदै हुनुहुन्छ किनभने तिनीहरू कम मूल्यमा छन्? म शर्त गर्छु कि यो गल्ती हुनेछ। हामीले बुझ्यौं, स्टक बजार क्र्यासले लगानीकर्ताहरूलाई लोभ्याउँदैछ जो किन्न चाहन्छन् तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले अन्धाधुन्ध रूपमा स्टक किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, एक स्टक मार्केटर को रूप मा, एक को धैर्य र कम्पनी को ठोस अनुसन्धान को आवश्यकता छ। यस अनुसन्धानमा एक्सपेन्स रेसियो र अन्य तथ्याङ्कीय तथ्याङ्कले लगानीकर्तालाई सही दिशातर्फ इंगित गरेको खण्डमा र सेयर बजार क्र्यास भएको खण्डमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै शेयरको मूल्य बढाउन कम्पनीहरूलाई कति समय लाग्ने भन्ने अनुमान जस्ता महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू समावेश छन्। कम्पनीको कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीलाई असर गरेको छ ।
माथिका सबै कुरालाई ध्यानमा राखेपछि, शेयर बजारमा गिरावट आएपछि लगानी गर्न र बढी नाफा बुक गर्न सकिन्छ। यद्यपि, स्टक बजार क्र्यासको प्रभाव कम हुनु र मूल्यहरू फेरि बढ्नु अघि यी सबै कडा अनुसन्धान न्यूनतम समयमा गर्न आवश्यक छ।
थप दीर्घकालीन लगानी गर्नुहोस् :-
यो दीर्घकालीन स्टकहरूमा लगानी गर्ने उत्तम अवसर हो जब बजार चट्टान तल हिट हुन्छ। यसको कारण सरल, दीर्घकालीन स्टकहरू छन् जुन 2-5 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म रहन्छ, यसले मुद्रास्फीति र उच्च नाफा मार्जिनको अप्रत्यक्ष प्रभावको कारणले बढी नाफा दिन्छ। तपाईले सोचिरहनु भएको छ कि डिफ्लेसन कसरी बढी नाफाको एउटा कारण हुन सक्छ, कारण के हो भने तपाईले आज गरेको लगानीले आगामी 2,5,10 वर्षमा डिफ्लेसनका कारण कम मूल्य राख्छ, र त्यो समय, लगानीलाई विचार गर्न सकिन्छ। न्यूनतम तर नाफा संख्यामा धेरै हुनेछ।
By: Sandeep Kumar Chaudhary ( Founder: SMAARC)
Previous Previous post: Best Oil and Gas ETFs for Q4 2021
Next Next post: Top Consumer Discretionary Stocks for December 2021